Maxaa ka soo kordhay heshiiska ay kooxda Manchester United ku dooneyso Jadon Sancho? – Gool FM
(Manchester) 30 Juun 2021. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in heshiis ay kula saxiixaneyso Jadon Sancho la gaartay kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund, inta lagu guda jiro suuqa xagaaga.
Shabakada “Sky Sports” ayaa soo werisay fiidnimadan Arbacada ah, in kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford ay kala heshiisay Borussia Dortmund saxiixa Jadon Sancho, si uu u xirto maaliyada Manchester United laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda.
Sky Sports ayaa sharaxday in heshiiska labada koox uu ku saabsan yahay qiimaha lacageed ee qandaraaska, kaasoo ku kalifiaya Red Devils in khasnadeeda ay kala soo baxdo qiimo dhan 73 million pounds.
Manchester United ayaa sidoo kale heshiis shaqsi ah la gashay laacibka reer England ee Jadon Sancho, ciyaaryahanka ayaana si rasmi ah u saxiixi doona heshiisyada, isla markaana ku biiri doonaa Red Devils marka uu dhammaado Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee EURO 2020.
Sancho ayaa loo qorsheeyay inuu baaritaan caafimaad ku maro Manchester United kaddib marka uu dhammaado Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee EURO 2020, si uu u xirto lambarka 7-aad ee kooxda Red Devils.
Qiimaha heshiiska ayaa gaaraya 90 million euros, oo ay ku jiraan lacago gunooyin ah iyo sidoo kale lacago la siin doono wakiiladiisa heshiiska soo dhammeeyay, iyadoo la fahansan yahay in ciyaaryahanka uu saxiixi doono qandaraas uu ku sii joogayo garoonka Old Trafford illaa xagaaga 2026.
Isku aadka Horyaalka LA LIGA oo xalay la sameeyay...(Kulammada toddobaadka koowaad iyo taariikhda uu furmayo)